musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » Gurukota Rezvekushanya Vakasuruvara Nekufa kweJamaica Songbird
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Caribbean • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Jamaica Kupwanya Nhau • mumhanzi • nhau • ushanyi
Muimbi weJamaica Karen Smith Anopfuura
Jamaica Gurukota Rezvekushanya, Hon. Edmund Bartlett, nevamwe vakuru vekushanya vari kuchema kufa kwemuimbi anozivikanwa uye anodiwa, Karen Smith. Smith, uyo akaita kwemakumi emakore semuimbi wecabaret munzvimbo dzese dzekutandarira, afa nhasi nhasi.
Karen akazove zita remhuri mukushanya uye yakafara Jamaica.
Akave akafanana nekuvaraidzwa mukushanya uye aive achienda kunoridzira kwezviitiko zvakawanda mubato iri.
Smith ndiye aimbova purezidhendi weJamaica Federation of Musicians uye Affiliates Union uye akagamuchira Order of Distinction pachinzvimbo cheMukuru.
“Chikamu chese chekushanya chinochema kushaya kwe Karen Smith uyo akaunza inoshamisa spark uye hunyanzvi kumitambo yake. Ndinonyaradza mhuri yake, shamwari, nevamwe vake, ”akadaro Gurukota Bartlett. "Karen akave zita remhuri mukushanya uye yakafara Jamaica nezwi rake rakapenya uye izwi rakasiyana," akawedzera Gurukota Bartlett.
“Ndinodada nekuve shamwari yaKaren, zvirokwazvo aive mukurumbira wenyasha, runako uye kugona. Nziyo dzake hadzina kungofadza vazhinji vedu asi dzakagadzira runyararo kuvanhu vazhinji mumamiriro akasiyana siyana. Anozorangarirwawo nehutungamiriri hwakanakisa hwaakapa kumumhanzi, ”akadaro.
Smith aimbove purezidhendi weJamaica Federation of Musicians uye Affiliates Union uye aive akagashira iyo Order of Distinction pachinzvimbo cheMukuru.
“Karen akazova akafanana nevaraidzo mukushanya uye yaive yekuenda kunoitisa zviitiko zvakawanda mubato iri. Wanga uchiziva kuti kana Karen angochengeterwa, mutambo wacho unenge usina musono uye uchinakidza, ”akadaro Director we Tourism, Donovan White.
Inozivikanwa nenziyo dzinosanganisira "Paradhiso," "Ndakatsvaga Ishe," uye "Ini Ndingawe," Smith aivewo chikamu chimwe muzvitatu cheboka, Pakage, raisanganisira vaimbi Gem Myers naPatricia Edwards.
Italy Tourism Ministry pakupedzisira vadzoka vanoti BMT Mutungamiri